Ugu Weyn Ee Chardonnay
The canab farsamo ugu fiican
Si ka duwan noocyada miiska, noocyo farsamo waxay leeyihiin content sare ee casiir ee berry. Wixii soo saareyaasha wax soo saarka ah, qaababka physico-kiimiga ah ee canabku waa mid muhiim ah, halka muuqaalka muuqaalka midhaha ay tahay mid labaad. Noocyada farsamadu waa wax aan fiicneyn oo ku saabsan shuruudaha daryeelka iyo koray, sida caadiga ah, habab badan oo farsamaysan oo ku yaal aagag ballaaran.
The canab ugu wanaagsan ee cad
Aan ka hadalno canabkee cad: ha u yeesho antioxidants yar, laakiin ay ku jiraan kiimikada dabiiciga ah, fitamiinada, fareerka, bioflavonoids, borotiinka, potassium, dufka, fosfooraska, magnesium, fuudka caddaanka ah, canab waa cunto qiimo leh. Aynu soo dhaweynno canabkeena cajiibka ah ee canabka ah "Valentina" Cinjirrada Valentine waa nooc ka mid ah canab, oo ah caleemo xoog leh oo soo kordhaya.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Chardonnay 2019